Isku-darka dukaamaysiga si habsami leh boggaaga WordPress | Martech Zone
Isku-darka dukaamaysiga si muuqaal la'aan ah Boggaaga WordPress
Jimco, Abriil 29, 2016 Thursday, April 28, 2016 Douglas Karr
Waxaan u diyaarinaynay waxoogaa goobo Woocommerce ah macaamiisha… mana ahayn wax fudud. Isdhexgalka Woocommerce waa waxoogaa sir ah oo astaamo dheeri ah ayaa inta badan laga heli karaa iyada oo loo marayo tiro badan oo fiilooyin ah oo u baahan diiwaangelinno lacag bixin ah… iyo qaabeyn dheeri ah. Waxbadan iyo qaabeynta badan.
Hadaadan waligaa arkin Soo iibso, waxaan wadaagnay fiidiyow ku tusaya sida loo sameeyo dejiso bartaada internetka oo dhan wax kayar 25 daqiiqo! Shopify runtii si adag ayey u shaqeysay si ay u bixiso is-dhexgal isticmaale-saaxiibtinimo oo loogu talagalay shakhsiyaadka aan ku xirnayn shabakadda si ay u bilaabaan boggooda oo ay ugu bilaabaan iibinta internetka.
Aqoonsiga inay jiraan in ka badan 60 milyan oo bog oo laga dhisay WordPress waa wax aan la iska indhatiri karin. Oo Shopify mar dambe iskama indha tirayo - waxay sii daayeen labada mawduuc iyo qalab fudud dhexgeli boggaaga Shopify si aan kala go 'lahayn ula WordPress.
Haddii aad horey u heshay goob aad u fiican oo aad kaliya raadineyso inaad isku dhafto badhamada wax soo saarka si aad ugu darto alaabada gawaarida wax iibsiga, Shopify waxay soo saartay qalab bilaash ah oo la shaqeeya goob kasta ama mawduuc.
Qalabka WordPress wuxuu u oggolaanayaa maamulayaasha bogga inay hoos u dhigaan alaabada leh badhamada iibsiga wixii dhinac ah, bogga ama boostada. Markuu booqdaha gujinayo badhanka, gaari wax iibiya oo soo baxa oo goobtaada ayaa soo muuqanaya oo xitaa macaamiisha u oggolaanaya inay alaabooyin badan iibsadaan hal mar.
Soo Degso Plugin-ka
Tags: dukaankabadhanka shopifyduub mawduucyadaWordPressis-dhexgalka ecommerce eraybixintais dhexgalka wordpress
Sida Dib Loogu Gudbiyo Faylka Cusboonaysiinta ama Cusub
Aaway Wesley Guusha SXSW ee Miisaaniyadda Yar
May 5, 2016 at 12: 56 PM
Soo duub runti waa qabow. Waxaan ku tijaabiyay mid ka mid ah barahayga oo si fiican ayey u shaqeysaa. Mahadsanid!